Xiaomi Redmi 10X Green (6GB/128GB) ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Redmi 10X Green (6GB/128GB)
Xiaomi Redmi 10X Green (6GB/128GB)
Display: 6.53-inches Protection: Corning Gorilla Glass5Ram: 6GB Storage: 128GB CPU: Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Chipset: MediaTek Helio G85 (12nm) Camera: 48MP+8MP+2MP+2MP Front rear Camera: 13 MP,... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 157734N/ASee more: Mobile Phone, Mobile Phones, New Arrivals, Products, Shop, XiaomiFilter by: EDIT-ONE, Smartphones
Front rear Camera: 13 MP, f/2.3, (wide), 1.12µm
Battery: 5020 mAh Non-removable Li-Po battery,Fast charging 18W
Operating System: MIUI 11 base on Android 10
Xiaomi Redmi 10X က RAM နဲ့ Internal Storage မြင့်မားပြီး ဘက်စုံသုံးနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းပုံစံသစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အတွင်းပိုင်းမှာ ရေစိုခံနိုင်တဲ့ Water-repellent coating ပါဝင်ပါတယ်။ အတွင်းမှန်အတွက် IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကို 6.53” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး Resolution က 1080 x 2340 pixels (~395 ppi density) ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်း တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှန်မျက်နှာပြင်အဖြစ် Corning Gorilla Glass5ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ OS အဖြစ် Android 10 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အတွက် MIUI 11 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေဖို့ System ပိုင်းမှာ MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset နဲ့အတူ 2.0 GHz Octa-core Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ Mali- G52 MC2 (GPU) ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ‘Entry Level’ စမတ်ဖုန်းတွေထက် စွမ်းဆောင်ရည်သာလွန်ပေမဲ့ Game အမြင့်တွေ ကစားဖို့အတွက်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ Internal Storage – 128GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး သီးသန့် SD ကတ်လည်း ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ RAM 6GB ဖြစ်တဲ့အတွက် Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ တပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ နောက်ကျောဘက်ကင်မရာအဖြစ် 48MP (wide) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) +2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ HDR နဲ့ Panorama တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး ကောင်းမွန်လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတော့ 13MP Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး လှပသေသပ်တဲ့အမှတ်တရ Selfie ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်စေမှာပါ။ Fingerprint ကို နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ 5020 mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဘတ္ထရီအားကြာရှည်ခံတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Fast Charging 18W USB Type C နဲ့ အားပြန်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ USB OTG ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Reverse Charging 9W လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အရောင်ကွဲအနေနဲ့ အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်နဲ့ အပြာရောင် တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
The weight of Xiaomi Redmi 10X – 4G LTE Smartphone is about 7.02 oz with battery, which is average compared to most of the smartphones with the same size. The dimensions of this Xiaomi phone are average (6.39 x 3.04 x 0.35 inches). The size of the Redmi 10X 4G screen is measured diagonally, from corner to corner. The 6.53 inches IPS display of Xiaomi Redmi 10X 4G with 1080 x 2340 px resolution is multitouch capable.Powered by the Mediatek Helio G85 processor, the device comes with6GB of RAM and 128 GB of UFS 2.1 storage.Powered bya5020 mAh battery, the device features 18W fast charging and 9W reverse charging. The reverse charge feature is not wireless, but USB-C port.The Redmi 10X 4G, which comes withaquad-camera setup at the back, hasa48 Megapixel main camera. This camera is accompanied by an 8 Megapixel ultra-wide-angle,2Megapixel depth sensor, and2Megapixel macro camera. On the front,asingle camera witharesolution of 13 Megapixels is used. Redmi 10X 4G features includeaheadphone jack, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, and Type-C.
This item: Xiaomi Redmi 10X Green (6GB/128GB) K257,000